Idzi ndidzo nhau dzechina beta yeiyo iOS 15 uye iPadOS 15 | IPhone nhau
Ngirozi Gonzalez | 28/07/2021 10:48 | iOS 15, Noticias
Nhau dziri kuitika mumabetas evanogadzira eApple masystem anoshanda. Maawa mashoma apfuura iyo yechina beta yeIOS 15, iPadOS 15 uye mamwe masisitimu. Kunyangwe iyo yepamutemo kuburitsa manotsi ezvekuburitswa nyowani inotarisa mukugadzirisa iyo system uye kugadzirisa bugs dzakataurwa nevavaki, Zvitsva zvitsva zvinosanganisirwa zvine chekuita neyekare mabheji. Mune izvi beta 4 Dzimwe shanduko dzinounzwa dzakatenderedza dhizaini dhizaini yeSafari, mawijeti matsva uye zvimwe zvinhu zvinounzwa mumapurogiramu ekuzvarwa senge matsva ane hupenyu muApple app. Isu tinokuudza iwe nhau pazasi.
Chii chitsva mu beta 4 yevagadziri veIOS 15 uye iPadOS 15
Iwo makuru matsva ane chekuita nemhinduro yezvikanganiso zvakadhindwazve nevagadziri anogona kuwanikwa mune Apple yepamutemo webhusaiti. Mutsamba tinogona kuona zvikanganiso zvakagadziriswa neAPI kana chimiro chakakanganiswa. Nekudaro, vashandisi vasingazive zvakawanda nezve kodhi kana iyo system kutadza vanonyanya kutarisisa mune zvakavanzika uye zvinooneka zvitsva mune ino yechina beta. Tichaongorora izvo zviri kuonekwa mumaawa ekupedzisira. Kunyangwe zviri pachena kuti dzakawanda uye dzakawanda nhau dzichabuda nekufamba kwenguva. Iyo yakanaka vhezheni iyo inosanganisira shanduko mumatunhu ese ehurongwa.
Apple iri kuenderera mberi tweak Safari yeiyo iPadOS 15.
MuPadOS 15 beta 4, iyo yakaparadzaniswa tab bar yadzoka, uye ndiyo yekumisikidza default izvozvi.
Kana iwe uchida, iwe unogona * kuita sarudzo * kugonesa iyo nyowani compact tab bar mune Zvirongwa.
Kufona kwakanaka. 👍 pic.twitter.com/26GNfeJSyE
Tinotanga ne iPadOS 15 iyo yakabatanidza zvinhu zvitsva muSafari mushure mekuchinja kwayo kwakanyanya kwekugadzirwa uye pfungwa mune yekupedzisira betas. Mu beta 4 rakaparadzaniswa tab bar rakawedzerwa naro iro mushandisi anogona kuona iro rakanyanya URL kumusoro uye pasi, pazasi pe URL, iwo matabhu. Inotaridzika zvakanyanya uye seSafari iyo yatinogona kuona mu macOS Monterey. Nekudaro, Apple yaita kuti zviwanikwe kune mushandisi mune Zvirongwa mukana we dzokera kune yekare dhizaini yeSafari kuchinja pakati pe 'compact' kana 'kupatsanura' kunongedzera yekufambisa bar uye tabo.
Safari pane iyo iPhone yaitawo dzimwe shanduko mubeta 4. Bhatani rekugovana rinoshandurwa kubva panzvimbo kuenda pane imwe uye rinowanikwa mune tab bar, bhatani rekuzorodza rinosanganisirwa padhuze neiyo URL nekudaro uye yeanimhanzi inowedzerwa iyo inoderedza iyo tebhu. bar paunenge uchivhura webhusaiti. Chekupedzisira, kana iyo URL bhaa ikamanikidzwa kwemasekondi mashoma, sarudzo ye'Ratidza mabhukumaki 'inoonekwa.
Apple inodhinda iyo yechina beta yeIOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 uye macOS Monterey
Mune iyo nguva app yeiyo beta 4 yeIOS 15 sanganisira mamiriro matsva ehupenyu senge iyo yatinogona kuona mumufananidzo uyo musoro wechinyorwa. Mhedzisiro yemashure ehupenyu iyi yakachena chaizvo tichitarisa shanduko yeshanduro iyo iOS 15 yakawana mune mamwe maapplication emuno senge iyi.
Zvakare zvinosanganiswa iko mukana we goverana Maitiro eConcentration matinosangana nevamwe vanhu Kune rimwe divi, mamwe magadzirirwo akange aripo kuti agadziriswe neiyo nyowani interface muIOS 15 akagadziridzwa, senge chikamu che 'Akaunti' App Store. Mhedzisiro mhedzisiro kwave kutenderera kwematafura ayo anotendera kuwirirana pakati pemamenyu ese ehurongwa.
Chiito chitsva chinonzi 'Dzokera kumba skrini' chakabatanidzwa muchirongwa cheMapfupi. Iyo yaunogona kutamba nayo dzakasiyana dzakasiyana-siyana dzakatogadzirwa kana neaya achazogadzirwa kubva zvino zvichienda mberi. Pakupedzisira, yakaunzwa saizi nyowani yeiyo Podcasts app widget pane iPadOS 15.
Widgets uye App Raibhurari pane iPad yakanaka kwazvo. Uye kuve neayo yega yega Screen Screen chinja kuwanikwa zvichibva paFocus kuri nyore.
Ini handidi iro peji remutambo panguva yebasa, uye ini handidi nhau kana ndisiri kushanda. Tichave tichiedza neiyo granularity pano. pic.twitter.com/jLM5tKahSG
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Idzi ndidzo nhau dzechina beta yeIOS 15 uye iPadOS 15